Ọ bụrụ n’ị nọ n’ahịa ma ọ bụ n’ahịa, nweta ume ugbu a! | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ị nọ n’ahịa ma ọ bụ n’ahịa, nweta ume ugbu a!
Ọ na-eme kwa izu. Ana m enweta email site na onye na-ere ma ọ bụ atụmanya ma anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ụbọchị iji kpaa. M na-enyocha saịtị ha wee hụ ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Enwere m ike ijikọ ha na LinkedIn ịmụtakwu ntakịrị banyere ha. Bọchị edozila, a na-anabata ọkpụkpọ kalenda m wee gaa n'ihu.
Izu ole na ole na-aga ma na-egosi na onye ọ bụla maara ihe. Amaghị m aha ahụ, n'ihi ya, m na-ele anya na ngalaba adreesị email ha sitere. Ọ bụrụ na enwere m ihu ọma, ọ bụ ụlọ ọrụ ha. Ọ bụrụ na m bụghị, m scre. M na-ele anya na saịtị ha ma ọ na-echekwa ncheta m ma ugbu a, m na-achọpụta ndị ha bụ na ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na enwere m ihu ọma.
Enweghị m ezigbo ebe nchekwa (ọ bụ sayensị!) Yabụ achọrọ m njirimara dị ka nke a. Oge ụfọdụ m na-edetu ụfọdụ ederede na Evernote, oge ụfọdụ na mmemme kalenda, oge ndị ọzọ m tụkwasịrị obi na m ga-echeta… mana anaghị m. N'oge ole na ole onye na-ejegharị n'ọfịs m na enweghị m onye m mara onye ha bụ ma ọ bụ ihe kpatara ha ji nọrọ ebe ahụ ka m wee gbaa egwu play jụọ ha ihe ha na-arụ, kedu ka ihe si aga, wdg… ihe ọ bụla gbalịa igba m ọsọ.
N’ikpeazụ, ọgwụgwọ dị! Refresh bụ ngwa mkpanaka na ngwa weebụ nke na-enye gị ohere ịchọ mmadụ ma lee profaịlụ ha na nkwukọrịta ọ bụla ị nwere isoro ha - ma ọ bụ site na email ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Kasị mma, ngwa na-abịa na tupu na post alerts maka gị. Enwere nzukọ na nkeji iri na ise? Ga-enweta ihe edetu na-agwa gị onye ọ bụ, ihe ị gwara ha okwu na nke ikpeazụ, ọbụnakwa na-enye gị ohere ịde ihe gbasara ha. Ọ bụ ihe ọmụma maka ndị dị ka m nwere nsogbu na-echeta onye ọ bụla ọzọ karịa nkịta ha (Gambino).
Ọ dị mma. Ọ mara mma. Ọ na-arụ ọrụ. Debanye ugbu a ma ị nwere ike ijikọ akaụntụ email gị, akaụntụ mmekọrịta gị yana ọbụlagodi Evernote.
Aga m ele a obere obere ihere oge ọzọ ịtọọ oge nzukọ m!
Mmelite: Ume ohuru maka Salesforce bidoro!
Ọ dị mma ịhụ Refresh etinyewo ihe ngwọta ha ozugbo na Salesforce, ngwá ọrụ dị egwu maka ndị na-ere ahịa iji nweta ozi na ndu ha, ndị mmekọ na ndị ahịa ha.
Tags: chọta ndị mmadụLinkedInlelie anyamarketingahanetworkndị mmadụtuonduume ngwaizu ike.ioNkwado ire ahịandị ahịasalesforce ngwaelekọta mmadụ na netwọklee ndị mmadụ anya
Sep 27, 2014 na 11: 21 AM
Ọ na-ada ezigbo jụụ. Agbalịrị m ịbanye (ịmepụta na akaụntụ) ọtụtụ ugboro ma ọ na-ada ada.
Echere m na ha bụ ndị 99% mobile.